Murashax Maxamuud Axmed Cabdalla oo ku dhawaaqay in uu Doorashada Madaxweynaha Puntland 2019 u tartamayo – Arrimaha.com
admin | October 10, 2018 | Wararka | No Comments
Maanta oo taariikhdu tahay 10/10/2018 ku aaddan maalin Arbaco ah, waxaan halkan ka caddaynayaa inaan ahay murashax u taagan Doorashada Xilka Madaxweynaha Puntland ee 2019-ka, bisha Janaayo la qaban doono, haddii Eebbe idmo. Walaalayaal sida aad la socotaan, guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland, waxaa muuqda in loo baahan yahay isbeddel siyaasadeed oo keeni kara Midnimo dhaba, Amni sugan iyo Caddaalad lagu kalsoonaan karo. Maanta intaasi Puntland ma taal ama waa ku yartahayba.
Barnaamijkayga waxa gundhig u ah:
1. Puntland waxay u baahan tahay madax ka dhabayn kara ballan-qaadyada ay sameeyaan xilliga doorashada. Waxan hubaa in haddii ballan qaadyada laga dhabayn lahaa in horumar muuqda la gaadhi lahaa.
2. Waxay Puntland aad ugu oomman tahay ka dhabaynta barnaamijka midaynta dhulkeeda oo sidii loo yagleelay aan marnaba suurta gelin. Dhibaatada u weyn ee aan wax ka qaban doono waa midnimada dadka reer Puntland.
3. Amniga Puntland ayaa noqday mid ka sii darayey sannadihii u dambeeyey, haba u xumadee tan iyo intii xukuumadda Cabdiweli Gaas talada dalka qabatay.
4. Puntland waxay sidoo kale u baahan tahay Caddaalad iyo isla xisaabtan dhab ah. Maxkamadaha Puntland maaha kuwo ku filan, u caddaalad falidda dhan walba ah samayn kara, sababta u weyn ayaa ah tababbar aan tayo badnayn iyo laamihii caddaaladda oo aan halkoodii dhaafin ama wax korodh ah samayn. Waxaa xusid mudan inaan meelaha qaarkood wax maxkamad ahi jirinaba.
5. Puntland waxay u baahan tahay siyaasad itijaah leh oo ku dhisan is aamminaad iyo dhammaystir dawladnimo Soomaaliyeed, taasoo Puntland hormuud ka ahayd illaa burburkii. Khilaafka soo noqnoqonaya ee Dawladda Fadaraalka iyo Puntland waa mid wiiqaya horumarka Puntland iyo kan Soomaaliya guud ahaan.
6. Puntland waxay sidoo kale u baahan tahay isbeddel hoggaanka siyaasiga ah. Waa in siyaasadda dalku noqotaa mid furan oo ay qayb ka yihiin dhammaan degaamada Puntland ummadda deggan. Loollanka ku dhisan waxa loo yaqaan ‘Sed Bursiga’ iyo habka ‘monopoly-ga’ waa in laga gudbaa. Murashaxiinta lacagta ku khasira doorasho walba, oo tartankoodu xadka dhaafay, maaha wax Puntland u baahan tahay.
7. Doorashooyin xor ah oo la gaadho, waxa ka horreeya in dhaqanka siyaasadaynta Golayaasha Dhaqanka Puntland, oo iyagu noqday kuwo ka tegey dawrkii dhaqan, oo kala xul iyo kala doorasho baarlammaanka iyo jagooyinka dawladda kala hororsigooda, ku mashquulay, waxay ahayd in looga gudbo habka axsaabta badan oo hadda hor laysku deyey laakiin fashil ku yimid. Waxa iga go’an inaan Puntland gaadhsiiyo meel jawiga siyaasiga ah iyo dhaqanku kala soocmaan. Waayo dhaqanku Puntland waa u laf dhabar, waana kan u da’weyn geyiga Soomaaliyeed, waana in la dhawraa oo wixii dhib iyo sumcad xumo u keenaya laga dhawraa.
Waxaan hubaa in haddii la ii doorto xilkaa culus, inaan ka soo bixi doono ballamahan, oo aanan ku mashquuli doonin hanti urusi, eex, hagrasho, iyo waajib gudasho la’aan. Sidaan hore u sheegay, waxan dadka Reer Puntland u ballan qaadayaa inaan ka dhabayn doono midnimo dalka wada saamaysa, amni iyo ammaano dhawr, iyo caddaalad laysku hallayn karo.
Maxamuud Axmed Cabdalla (Murashaxa Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland ee Soomaaliya).
Share the post "Murashax Maxamuud Axmed Cabdalla oo ku dhawaaqay in uu Doorashada Madaxweynaha Puntland 2019 u tartamayo"